नेप्सेमा ५.४० अंकको वृद्धि, ११५५.५० विन्दुमा परिसूचक | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नेप्सेमा ५.४० अंकको वृद्धि, ११५५.५० विन्दुमा परिसूचक
on: March 14, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
नेप्सेमा ५.४० अंकको वृद्धि, ११५५.५० विन्दुमा परिसूचक
नेशनल लाइफ संस्थापकले बेचे २१ करोडको शेयर
फागुन ३०, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से ५ दशमलव ४० अंकले बढेर १ हजार १५५ दशमलव ५० विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार १५० दशमलव ४१ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक डेढ घण्टामा घटेर १ हजार १४२ दशमलव ७५ विन्दुसम्म पुगेको थियो । सो विन्दुपछि उकालो लागेको परिसूचक २ हजार १५६ दशमलव ८६ विन्दुसम्म पुगेको हो । दश समूहको परिसूचकमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत बढ्न पुगेको हो । यस दिन होटल समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढीले बढेको छ । सो समूहको परिसूचक २ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ । सोल्टी र तारागाउँ होटलको शेयर मूल्य बढेपछि होटल समूहको परिसूचक बढेको हो ।
बिहीवार रू. ४८ करोड ५८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलानमा कारोबार रकम रू. ५ करोड ७५ लाख बढेको हो । बुधवार रू. ४२ करोड ८३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव ३६ प्रतिशत बढेर २ सय ४६ दशमलव १ विन्दुमा पुगेको छ ।
बजार पूँजीकरण बढेर १३ खर्ब ७७ अर्ब
१० समूहको परिसूचक, कुनको बढ्यो कुनको घट्यो ?
तिनाउ र युनाइटेड फाइनान्सको शेयरमा सर्किट ब्रेक
बिहीवार तिनाउ विकास बैंक युनाइटेड फाइनान्सको शेयर मूल्यमा सर्किट ब्रेक लागेको छ । तिनाउ विकास बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. १६ ले बढेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ७८ मा कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, युनाइटेड फाइनान्सको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. १६ ले बढेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ७८ मा कारोबार भएको छ । प्राथामिक बजारको मूल्यभन्दा पनि तल गएको रैराङ हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य बिहीवार रू. १ सयमा पुगेको छ । साथै, रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य ६ दशमलव १२ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. ९२ मा कारोबार भएको छ ।
बुक क्लोजको अघिल्लो दिन नेशनल लाईफका संस्थापकले बेचे २१ करोडको शेयर
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापकतर्फको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. १ हजार ७० मा रू. २१ करोडको शेयर कारोबार भएको हो । कम्पनीले १३ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयर प्रस्ताव गरेको छ । बिहीवारसम्म शेयर स्वामित्व भएकाले सो लाभांश पाउने छन् । तर कम्पनीको केहि संस्थापकले भने १ लाख ९६ हजार २ सय ६२ कित्ता शेयर विक्री गरेका छन् ।
दोस्रोमा एनसीसी बैंकको प्रतिकित्ता रू. २ सय १४ मा रू. १ करोड ९४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएका १ सय ७१ कम्पनीमा ९३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ४८ कम्पनीको घटेको छ । साथै, ३० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
दोस्रो घण्टामा ४.२२ अंकले बढेर १२६४.३३ विन्दुमा नेप्से (१ बजेको अपडेट)
मंगलवार पहिलो घण्टामा नेप्से स्थिर, १२५९.७१ विन्दुमा (१२ बजेको अपडेट)